चिम्पान्जी समुहभित्र चलेको शक्ति संघर्षबाट राजनैतिक नेताहरुले के कुरा सिक्न सक्छन् त ? अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय’का राजनीतिक शास्त्रका प्रमुख प्राध्यापक जेम्स टिलि भन्छन्...
फाइल फोटो : गेट्टी इमेज
बीबीसी । राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो मस्तिष्कमा एक किसिमको तस्वीर बन्छ । हाम्रो मस्तिष्कले राजनैतिक नेताको छबि झन् स्पष्ट रुपमा कोर्न सक्छ । एक नेताको चरित्र मित्रलाई दुस्मन र दुस्मनलाई मित्रवत व्यवहार गर्न पोख्त हुन्छ र उनीहरु जसलाई पनि शक्तिको आडमा आफू अनुकुल प्रयोग गर्न सक्छन् ।
यस्तै, राजनीति गर्ने नेतामा रहेको गुण आदिम कालदेखि जंगलमा बस्दै आएका मानव पुर्खाको रुपमा व्याख्या गरिएको चिम्पान्जी समुदायसँग मिल्दोजुल्दो हुने एक अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।
‘अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय’का राजनीतिक शास्त्रका प्रमुख प्राध्यापक जेम्स टिलिले लामो समय अध्ययन गरेर यो तथ्य पत्ता लगाउने कोशिस गरीरहेका छन् की चिम्पान्जी समुहभित्र चलेको शक्ति संघर्षबाट मानन जातिभित्र राजनीति गरिरहेका नेताहरुले के कुरा सिक्न सकिन्छ त ?
उनले गरेको अध्ययनलाई बीबीसीले राजनैतिक नेताहरुले चिम्पान्जीबाट कस्तो आचरण सुक्न सक्दछन् भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
१) मित्रलाई सँगै राख, दुश्मनलाई नजिक राख
चिम्पान्जीहरुका बीच हुने राजनीतिमा निष्ठा परिवर्तन गर्ने सिलसिला निरन्तर चलिरहन्छ ।
कुनैपनि समुहमा विश्वास प्राप्त गर्नको लागि चिम्पान्जी सँधै आफ्नो मित्रविरुद्ध जान र दुश्मनसँग मिलिजुली गर्नको लागि सँधै तयार रहन्छन् । यिनिहरुमा प्रायजसो सम्बन्ध मित्रको स्थान फाइदाको लागि हुने गर्दछ ।
२) बराबरीको सँग मात्र सम्बन्ध बनाउ
चिम्पान्जीमा बराबरीको स्तरमा संगठन विस्तार हुने गर्दछ । यसको अर्थ दुई वा दुईभन्दा कमजोर चिम्पान्जीले अर्को मजबुत संगठन भएको चिम्पान्जी समुहसँग संघर्ष गर्दछन् । यिनिहरुमा यस्तो कहिल्यै हुँदैन कि एक कमजोर चिम्पान्जी अर्को बलियो चिपांजीको गठबन्धनसँग काम गरोस्
यो एक तार्कीक तथ्य लाग्दछ । किनकी यदि हामीले बराबरीको सँगमात्र गठबन्धन गर्यौँ भने आफ्नो शाथीको सहयोगमा हासिल गरेको उपलब्धीमा बराबर हक मिल्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यदि त्यहि समुहमा कुनै अर्को सदस्य बलियो छ भने हाम्रो हक कम हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, चिम्पान्जीको समुह बराबरी बल भएकाहरु सँग मात्र हुने गर्दछ ।
३) सकेसम्म आफूसँग अरु डराउन् तर...
ज्यादै डराउने खालको र आफ्नो बलको दम्भमा राज गर्न सक्ने चिम्पान्जीमात्रै समुहको नेता हुन सक्छन् । तर, यस्तो नेता धेरै दिन टिकिरहन सक्दैनन् ।
एक सफल नेता हुनको लागि आफ्नो लागि समर्थन जुटाउन आवश्यक हुन्छ । अफ्ना जनताको बीचमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन आवश्यक हन्छ । यसको लागि नेताको हृदय दृढ हुनुपर्दछ ।
४) सुविधा देउ र राज गर
इतिहासलाई हेर्ने हो भने जसले जनतालाई सेवा र सुविधा बाँडेर समर्थन जुटाए उसले मात्र लामो समयसम्म नेता बनेर राज गर्न सकेका छन् ।
बीबीसी रेडियोको एक कार्यक्रममा एक यस्तो चिम्पान्जीको बारेमा जानकारी दिइएको थियो जसले १२ वर्षसम्म मानिसको घरबाट मासु उठाएर आफ्ना प्रजाको वासस्थानसम्म ल्याएर बाँडेर राज गरे । अहिलेसम्मको अध्ययनमा चिम्पान्जी समुदायमा सबैभन्दा धेरै समय १२ वर्षसम्म राज गर्ने उनी एकमात्र नेता हुन् ।
५) बाह्य खतराले समर्थन बढाउन सकिन्छ
चिम्पान्जीमाथि लामो समय अध्ययन गर्दा यस्तो जानकारी पाइयो की उनीहरुका समूहमाथि बाह्य खतरा आए चिम्पान्जीहरु आन्तरिक झगडा बिर्सेर एकजुट भएर खतराको सामना गर्दछन् ।
आश्चर्यजनक कुरा त यो हो की मानव समुदायमा यस्तो खतराले कुनै असर गदैन् । तर, अपवादको रुपमा आतंकवादविरुद्ध लड्न सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी हमला एक उदाहरण हुनुसक्छ । बीबीसी